နှစ်ကူး: မိုးရွာသော...တစ်နေ့... မန္တလေးပုံရိပ်
တတ်ကုန်ကြပြန်ပီ.. အဒူခြေမကိုစချိူးရမလဲ…အဲ..မှားလို့ ဘယ်ကနေစပီး မိုးရွာရင် ကောင်းပ!! ..မိုး…မိုး…မိုး… ဘယ်လိ်ုရွာရင်ကောင်းမလဲ…။ အဲ တိပီ.. “ သင်္ကြန်မိုး ” … ဟုတ်ပီ .. သင်္ကြန်မိုး နဲ့စရွာလိုက်တော့မယ်နော်..။ မန်းလေးမိုးလို့ ဆိုလိုက်ရင် ဂန္တ၀င်ရုပ်ရှင်ကားကြီး တစ်ကားဖြစ်တဲ့ “ သင်္ကြန်မိုး ” ၊ မန္တလေးမြို့ရဲ့ အငွေ့အသက်တွေ လွှမ်းထုံနေတဲ့ ဟောဒီ ။ “ သင်္ကြန်မိုး ” ကို မေ့ထားလို့ မဖြစ်သလို.. ၊ တစ်နှစ်မှ တစ်ခါသာပွင့်ဖူးသော သင်္ကြန်ရဲ့ သင်္ကေတဖြစ်တဲ့ ပန်းပိတောက် ကိုဖူးပွင့်စေသောမိုး။ ဤမိုးကို “ သင်္ကြန်မိုး ” ဟုခေါ်၏။
~~ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် တီးမှုတ်ကြတဲ့ ပွဲမှာ
ရာသီချိန်မှီ လန်းပွင့်ခဲ့တဲ့ ပိတောက်ကို
ပန်ဆင်ပါရင်လှသတဲ့ တင့်မှာမို့ ..
မိုးပြေးနဲ့ အရောက်လာ ပန်းပွင့်ဖို့ရာ..
လန်းဆန်းတဲ့ မိုးရယ်… မိုးပြေးလေးရေ….
ပိတောက်ပန်းပွင့်ရုံစိုရုံ… ဖြန်းပက်အုံး.. ~~
ဒီသီချင်းလေးဟာ အဆိုတော် မင်းသားကြီး ဦးဇော်ဝမ်း က ပိတောက်ပန်း ပွင့်ရုံ ၊ စိုရုံ ဖြန်းပက်ဖို့သာ သီဆိုခဲ့ပေမယ့် လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်၊ သုံးနှစ်လောက်ကတော့ “ မိုးပြေးလေး ” က သူနဲ့ အတူ “ လေမုန်တိုင်းလေး ” ကိုပါ ခေါ်လာတော့ မဏ္ဍာပ်တွေ ပြိုလုလု ဖရိုဖရဲတွေ ဖြစ်ကုန်ခဲ့ပါတယ်…။ မဏ္ဍာပ်ရှင်တွေ ထိုင်ငိုရခဲ့ရတဲ့နှစ်လို့ ခေါ်လို့ရတဲ့ နှစ်လို့ဆိုရင်လဲ မမှားနိုင်ပါဖူး။ မည်သို့ပင် ဆိုစေကာမူ မဏ္ဍာပ်ရှင်များ အပါအ၀င် မြန်မာပြည်အနှံ့ မှာရှိတဲ့ လူအတော်များများက “ သင်္ကြန်မိုး ” ကို စောင့်မျှော်နေမယ်ဆိုတာ ရာနှုန်းပြည့် သေချာပါတယ်။ ( ရာသီဥတု ကလည်းပူတာကိုး .. မီးမမှန်တော့ သဘာဝက အလကားပေးထားတဲ့ အဲယားကွန်းကို တောင့်တတာ ဆန်းပါဖူးနော်… :P )
မိုး ကိုအမျှော်ကြီးမျှော် ကြတဲ့သူတွေထဲမှာ ကလေးတွေက ထိပ်ဆုံးကဖြစ်မယ်။ ဟိုး..ငယ်ငယ်တုန်းက ၄ တန်းနှစ်လောက်မှာ … မိုးစွေလိုက်ပုံများ နေ့တိုင်း မိုးအရမ်းရွာတော့ စာသင်ခန်းထဲ ရေတွေဝင်လို့် ကျောင်းခဏပိတ်ထား ရတဲ့အထိပဲ။ နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက် အပြင် မိုးရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက် ထပ်တိုးသွားတာပေါ့။ ကျူရှင်လဲမသွားရ ၊ ကျောင်းကလဲ ခဏပိတ်ထား ဆိုတော့ ကလေးအတွေးနဲ့ အရမ်းကို ပျော်ခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒီ အကျင့်ကတော့ အရိုးစွဲသွားပီ… ကြီးတဲ့အထိ ပါလာခဲ့တယ်..။ ( မိုးရွာရင် reason မလိုပဲ ကျောင်းပျက်လို့ရတယ်လို့ )…။ ဟ…ဟ..။ အိမ်စာတွေ မပီးသေး ၊ စာကလည်း မရသေးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်က ကျောင်းသွားချိန်မှာ မိုးသည်းသည်းရွာလိုက်ရင် သူ့အတွက်ကတော့ ထီသိန်းဆုကြီး ပေါက်သွားခြင်းပဲ။ သူငယ်ချင်းတို့ရော ငယ်ငယ်တုန်းက မိုးရွာတာကို နှစ်သက်ကြလား?? ကျောင်းပျော်တဲ့ သူကတော့ .. ငြင်းမှာပေါ့ “ဟင့်အင်း” လို့။
တစ်ချို့ဘောလုံး ၀ါသနာအိုးတွေကလည်း မိုးရွာတာနဲ့ ဘောလုံးပိုက်ပီး လမ်းထိပ်ရောက်နေပီ။ အင်း…ဒီလို.. ၀ါသနာကြီးသူတွေထဲက လက်ရွေးစင် ဘောလုံးသမားတွေ ဖြစ်မသွားနိုင်ဖူး ပြောလို့မရဖူးလေ… ဒီလို.. မိုးထဲ လေထဲ training ဆင်းခဲ့ရတော့ ပြိုင်ပွဲမှာ ကွင်းထဲမိုးရွာလို့ကတော့ တစ်ပန်းသာပီ..။ ( ဖြစ်နိုင်မယ်ထင်ဒါဘဲ..။ အဟိ.. )
အဲ…ရှိသေးတယ်..။ မိုးရွာပြီ ဆိုတာနဲ့ မိုးရေချိုးမယ်လို့ ပူဆာတာလဲ .. ကလေးတွေပဲ ..။ အိမ်ကလူကြီးတွေက မီးစိမ်းပြလိုက်တာနဲ့ .. “ ဟေး ” ခနဲ့ ပြေးထွက်သွားတာ နောက်က မှာတမ်းတွေတောင် ဆုံးအောင်နားမထောင်ဖူး..။ မိုးတိတ်သွားရင် မိုးပြန်ခေါ်လို့ မရနိုင်ဖူးလေ…။ အိမ်ရှေ့ ပက်လက်ဖောင်း လူသွားလမ်းပျောက်ပြီး ရေပြင်ကြီး ဖြစ်သွားလို့ကတော့ လက်ပစ်ကူးပီးသားပဲ။ ( ရေကူးချန်ပီယံတွေများ ဖြစ်သွားမလားပဲ ... ) ဗွက်ရေ၊ မြှောင်းရေ ဘာမှမစဉ်းစားပဲ ပတ်ဝန်းကျင်ကို မေ့ပီး ပျော်နေလိုက်ကြတာ။ ပါးစပ်ထဲရေ၀င်မှာတော့ စိုးရိမ်ပုံနဲ့ ပါးစပ်လေးတွေကို အတင်းပိတ်ပီး ရေထဲမှာ “ တစ်ဗွမ်း…ဗွမ်း ” နဲ့။ သူတို့ ပျော်နေကြတာကိုကြည့်ပီး ကိုယ့်ဆီတောင် အပျော်တွေကူးလာတယ်…။ ရွှေလိုဥပီး ပိုးမွေးသလို မွေးထားတဲ့ ကလေးများကြတော့ ခြူခြာလိုက်ပုံများ …။ နှစ်ကူး ငယ်ငယ်တုန်းကတော့ မိုးရွာရင် ကုတင်အောက်တွေ ၀င်ပုန်းရတာ သဘောကျတယ်…။ ကြောက်လို့မှုတ်ဖူး.. အဲဒါ ပျော်လို့ ..ဟိ..ဟိ…( တစ်ညိုးရီးပဲနော်.. )
မိုးရွာတာကို အိမ်ထဲကနေ ထိုင်ကြည့်ရတာလည်း… အရသာတစ်မျိုးပဲ..။ မိုးရေထဲမှာ ကြွက်စုတ်လေးတွေ ဖြစ်နေတဲ့သူတွေ ၊ ဆိုင်ကယ်ပျက်လို့ တွန်းနေတဲ့သူတွေ ၊ ကားပျက်လို့ လမ်းဘေးမှာ ရပ်ထားရတဲ့သူတွေ ဒါတွေကတော့ မရိုးနိုင်တဲ့ မြင်ကွင်းတွေပါ။ ( ဪ… သူများတွေမှ စိတ်ညစ်နေပါဒယ်ဆိုမှ နှစ်ကူးတစ်ယောက်ကတော့ အားမနာပ ကြည့်နေလိုက်တာ ) ။ ကိုယ်တိုင်လဲ ဒါမျိုး ကြုံဖူးတာပေါ့။ သူငယ်ချင်းတွေ စုပီး ဆိုင်ကယ်နဲ့ လျှောက်လည်တုန်းက လမ်းမှာမိုးမိရော။ လျှောက်လည်တာဆိုတော့ ရှိုးအပြည့်ပေါ့။ မကြာပါဖူး.. မိုးမိတော့ ကြွက်စုတ်လေးဖြစ်သွားတယ်..။ ကျောပိုးအိတ်က မိုးကာသား ဆိုပေမယ့် အထဲက ပစ္စည်းတွေမိုးစိုကုန်မှာ စိုးလို့ ဆိုင်ကယ်ကို အရှိန်မြှင့် လိုက်ပြန်တော့လည်း မိုးသီးမိုးပေါက်တွေက မျက်နှာကို ခဲနဲ့ပစ်ပေါက်လိုက်သလားပဲ။ ချမ်းလိုက်တာများ အရိုးကွဲမတတ်။ ချမ်းလွန်းလို့ သွားချင်းရိုက်တာ ပါးတွေလဲညောင်းလို့...။ မိုးမိတဲ့ အရသာကို တော်တော်လေး စိတ်ကုန်သွားတယ်။ အိမ်ကို ရောက်တော့ ရေစိုဝတ်တွေ ချက်ချင်းလဲပီး စောင်ထဲမှာ ကွေးပလိုက်တော့လည်း ဇိမ်ကျလိုက်ပုံများ… ဟ… ဟ.. ။ ဒီလိုတော့လည်း မိုးမိလာတာ တော်တော်ကောင်းသလိုလိုပဲနော်.… :P
ကဲ နှစ်ကူးတစ်ယောက်တော့ မိုးရွာပီးပီ…။ ထူးထူးခြားခြား ဒီနေ့ည ၉ နာရီခွဲ လောက်မှာ မစို့မပို့ မိုးလေးရွာလိုက်သေးတယ်…။ မိုးရွာတော့ မီးပါပျက်သွားတယ် …။
မီးဘာကြောင့် ပျက်ရတယ် … ၊ မိုးရွာလို့ ပျက်ရတယ်… ၊
မိုးဘာကြောင့်ရွာရတယ် … ၊ နှစ်ကူး ရွာလို့ လိုက်ရွာတယ်..။
နှစ်ကူး ဘာကြောင့် မိုးရွာတယ်… ၊ ဖိုးချမ်း Tag လို့ ရွာရတယ်..။
ဖိုးချမ်းဘာကြောင့် Tag ရတယ်… ၊ Tag ချင်လို့ Tag ပါတယ်..။
ကဲ နှစ်ကူးကလည်း အ Tag မခံရသေးသူများကို ထပ် Tag လိုက်မယ်… အပ်ချလောင်းးးး….
Posted by နှစ်ကူး at 6/21/2007 11:38:00 AM
Labels: Tag ခံရခြင်း
နှစ်ကူးရေ အပ်မိန်လဲ ကျောင်းတက်ခါနီး ချိန်မှာ မိုးသည်းသည်းရွာရင် အရမ်းပျော်တာပဲ... ထီဆုကြီးပေါက်တာ ထက်တောင် ပျော်သေးး ..ထီကထိုးမှမထိုးတာကိုးးးးလို့.. ဟီးးအဲ့ကြောင့် တူနယ်ဂျင်း ဖြစ်နေကြတာထင်ဒယ်နော်.. :D:D:D
" အိမ်စာတွေ မပီးသေး ၊ စာကလည်း မရသေးတဲ့ ကလေးတစ်ယောက်က ကျောင်းသွားချိန်မှာ မိုးသည်းသည်းရွာလိုက်ရင် သူ့အတွက်ကတော့ ထီသိန်းဆုကြီး ပေါက်သွားခြင်းပဲ "
နာငယ်ငယ်တုန်းက အဲလိုဆို သိပ်ပျော်တာ :P
ဒီမှာက မိုးရွာလည်း ကျောင်းကပိတ်ဝူးဟ..
ခဲပန်းချီအကြောင်း ( ၈ )
ခဲပန်းချီအကြောင်း ( ၇ )
ခဲပန်းချီအကြောင်း အပိုင်း ( ၆ )